Ngabe Ukumaketha Kwakho Kusemthethweni? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 30, 2010 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Ummeli uDavid Castor, an inkampani yabameli egxile kakhulu kumabhizinisi okuqala nawakwa-SaaS, wangithumela i-imeyili ngempelasonto ngezindaba zokuthi I-FTC ixazulule isisulu sayo sokuqala yemithetho emisha yokudalula.
Njengengxenye yendawo yokuhlala ehlongozwayo (i-PDF), inkampani ye-PR Reverb Communications futhi umnikazi uTracie Snitker kumele asuse noma yikuphi ukubuyekezwa kwe-iTunes okwabhalwa ngabasebenzi bakwaReverb abazenza amakhasimende ajwayelekile futhi abahluleka ukudalula ubudlelwano phakathi kukaReverb namakhasimende akhe wonjiniyela womdlalo. Isivumelwano siphinde sivimbele uReverb noSnitker ekuthumeleni ezinye izibuyekezo ku-iTunes ezenza sengathi zivela kubathengi abazimele noma abadebeselela ukudalula noma yikuphi ukuxhumana phakathi kwenkampani namakhasimende ayo, ngokusho kwe-FTC.
Lokhu yizinto ezishaqisayo. Eminyakeni engamashumi amabili, anginaso isiqiniseko sokuthi ngisebenze noma ngikhangisela noma inkampani ye-PR engazange iphume endleleni yayo yokukhuthaza amaklayenti ayo izimpahla nezinsizakalo. Ngiyaqhubeka nokukhuthaza amaklayenti ami noma nini nanoma kuphi lapho ngikwazi khona - hhayi ngoba ngifisa ukukhohlisa umphakathi, kodwa ngoba ngikholelwa kulokho abakuzuzile. Ngizama ukudalula izenzo zami isikhathi ngasinye - kepha ngineqiniso lokuthi ngiphuthelwa yinqwaba yemaki.
Lokhu kungashintsha konke. Njengoba inkampani yakho ifisa ukusebenzisa amasu okuphawula, ukuxhumanisa amasu, ukukhushulwa, njll ... kubonakala sengathi konke kungaba isenzo sobugebengu uma kufezwe ngaphakathi e-United States futhi kungadaluli ukuxhumana phakathi kwenkampani namakhasimende.
Will Abashayeli beNascar kufanele bamemezele abaxhasi babo kuyo yonke ingxoxo ngoba bagqoke isigqoko noma baphuza isoda? Ngabe kuzofanele babeke ukuvezwa ngezansi kwesitika ngasinye sebhampa?
Will Amakomidi Ezenzo Zezombusazwe (Ama-PAC) kufanele amemezele kuwo wonke amazwana kuwo wonke amasayithi ukuthi ayingxenye yenhlangano enobudlelwano obukhokhelwayo nosopolitiki? Kuthiwani-ke lapho bethumela izinkulungwane zamalungu ukuthi ziyophendula ukuvota online?
Uma ngisho iklayenti kufayela le- isethulo noma inkulumo njengesibonelo esingahlobene nobudlelwano bethu, manje sengidinga ukudalula ukuthi bayiklayenti?
Mayelana nani abalandeli nomlandeli ubala? Anginayo indlela yokudalula ukuthi bangaki abantu abangilandelayo noma bangaki abantu engibalandelayo ngoba bangamakhasimende noma ngiyiklayenti. Ingabe leyo nombolo ayishintshi imibono yomphakathi futhi isetshenziselwe ukumaketha?
Ngisanda kubhala i- ibhulogi ibhuku lapho ngisebenzise khona amaklayenti ami amaningi nabathengisi (kufaka phakathi Ixwayisa uCastor) njengezibonelo encwadini. Ngabe ngizohlawuliswa ngoba angidalulanga ukuthi singaba nobudlelwano bebhizinisi, noma sake saba nabo?
Will abavangeli bomkhiqizo ezingqungqutheleni kudingeka bafake ibheji noma isigqoko esisho ukuthi bazokhuluma ngamakhasimende abo, imikhiqizo noma izinsiza zabo?
Kwesinye isikhathi mina izinkampani ezibhekiswe kuzo bese ubhala ngazo, noma ngizethule ngethuba lokwakha ubudlelwano bebhizinisi ngokuzayo. Ngabe manje sengidinga ukudalula lapho ngibathengela ikhofi noma ngibabamba isandla ukuthi ngikwenza ngoba nginethemba lokuthola ibhizinisi labo?
Will udumo ama-voice-overs nokuvela kwizikhangiso manje sekudinga ukuphela ngokuthi bakutshele ukuthi bangabaxhasi abakhokhelwayo bomkhiqizo noma isevisi?
Ngiyakuqonda ukuthi umthetho uzama ukubhuntshisa inkohliso imikhuba, kepha inkinga ukuthi yonke imininingwane yami eku-inthanethi, i-akhawunti yami ye-twitter, izikhundla zami ze-Facebook, amawebhusayithi wami, nokubhala kwami ​​KONKE kususelwa ebudlelwaneni engibe nabo namabhizinisi. Imali engenayo yenkampani yami incike ekutheni amaklayenti ami athengiswa kanjani. Ngingummeli wabo okhokhelwayo - amahora angamashumi amabili nane ngosuku nezinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Angizami ukukhohlisa noma ubani… kepha ngizama ukukhulisa igunya, ukuqwashisa, nokushumayela egameni lamakhasimende ami. Ngizokhuluma ngobani abanye ?!
Ungahle ungifakele amakhokho manje bese ulahla ukhiye.
Noma ngingahlala eCanada ngiqhubeke nokwenza engikwenzayo. Kukhona abantu abaxakekile… susa imikhuba yakho yokukhohlisa kude nonxweme.
Tags: ixwayisa ukhastorudavid castorukudalulwaftcngokungemthethoummelizomthethoimithetho yezokumaketha
Aug 30, 2010 ku-11: 04 AM
Kubonakala kimi kunakuzo zonke izindawo, uhulumeni wesifundazwe, ngenkathi ezama ngokumangalisayo ukukala inkundla yokudlala, ecindezela kakhulu ebhizinisini elicindezelayo. Ngiqonde ukuthi yini elandelayo, okwenza ukukhangisa kungavumelekile ngokujwayelekile?
Mhlawumbe kufanele bagxile kakhulu ezinkampanini ezakhiwe kusuka phansi ukuze zikhohlise abantu-njengezinsizakalo zokweluleka ngesikweletu. O, ngishilo lokho ngokuzwakalayo? I-LOL
Aug 30, 2010 ngo-12: 00 PM
Kuyahlekisa ukusho lokho, Preston! I-FTC isanda kukhipha amakhasi angaphezu kwama-200 emithethweni emisha elawula izinsizakalo zezikweletu. Kungase kungabi yinto embi kakhulu, ngoba kuzodudula iningi lalawo mabhizinisi ngaphandle kwebhizinisi. Sineklayenti elisohlangothini oluhle lomkhakha futhi kuyakhathaza ukuthi kufanele bancintisane nalabo bakhohlisi.
Impela, okuxakayo ukuthi izinkampani zamakhadi wesikweletu ziyaqhubeka nokuqothula abathengi kwesokunxele nakwesokudla… kepha amaFeed alandela ezinye zezinkampani ezizama ukukulungisa!
Ngivumelana nawe ngenhliziyo yonke, noma kunjalo. Lokhu ngeke nje kuvimbe ibhizinisi, kuzothumela amabhizinisi amaningi phesheya kwezilwandle futhi lapho kufinyelela khona i-FTC!
Aug 30, 2010 ngo-6: 22 PM
Um, awunasiqiniseko sokuthi zonke lezo zibonelo ziqhathaniswa kanjani. Lokhu ukwenza sengathi usho izinto okhokhelwa zona ngaphandle kokwazi ngomsebenzisi wokugcina ukuthi uyakhokhelwa ukusho leyo nto futhi akuwona umbono wakho ngale ndaba. Futhi lokhu kumayelana nezindawo lapho abantu bezosizakala ngokuqamba amanga. Izinkampani eziningi ezisemthethweni ezinokubuyekezwa kwesisebenzi noma ezisho okuthile kumkhiqizo zizodalula iqiniso esikhundleni sokuzama ukuzenza umfana oneminyaka engu-13 othande umdlalo noma umama othande incwadi ku-amazon. Ngicabanga ukuthi ukwethembeka komuntu okuthumelayo empeleni kuyikho okwenza umehluko.
UNascar - Nginesiqiniseko sokuthi sonke siyazi ukuthi abaxhasi bakhokhile ukuze babekhona ngakho-ke asikho isidingo sabo sokuchaza okusobala. Manje okungaba mnandi wukwenza izimoto ezixhaswe izinkampani zezidakamizwa ukuthi zidonse i-trailer efakwa kuhlu yonke imiphumela emibi ebhodini lezikhangiso ukuze bonke babone. 🙂
Ama-PACs - Lolu olunye udaba olubucayi oludinga ukulungiswa ngokulinganayo kepha alusoze lwadabukisa.
Amakhasimende ezethulweni - ngicabanga ukuthi iningi labantu liyakwenza futhi kufanele, angiqiniseki ukuthi kungani ungeke ube sesimweni esiningi uma usebenzisa njengesibonelo ufuna abantu bazi ngempumelelo obekufanele bakuqashe ngayo futhi. Mhlawumbe ngiphuthelwa yisibonelo esisobala lapho othile ezozuza kulokhu (okunye nje kube yimikhakha yokuthengisa eqondile.)
Ukuba ngumlandeli noma umlandeli empeleni akusizi ngalutho ngakho ngiyangabaza ukuthi lokho kusho okuthile. Ngisho ukuthi uyazi ngempela ukuthi ngubani ongilandelayo. Noma ukhuluma ngokusebenzisa izibalo zakho ukukhangisa ukuthi ulunge kangakanani lapho empeleni kungamanani angenanzuzo?
Encwadini yokuqala, anginayo ikhophi (ngiyaxolisa) ngakho-ke anginasiqiniseko sokuthi ukhulume kanjani ngayo encwadini, kepha i-athikili ibonakala ikwazisa ukuthi kunobudlelwano lapho. Ngabe bekucaca ngokwengeziwe ukuthi bebeyikhasimende lakho langaphambilini / lamanje, impela kodwa angicabangi ukuthi kukhona umuntu ozozibheka njengomuntu wangaphandle ongachemile obukeza le ncwadi njengoba besho ukuthi banikele kuyo. Manje, ngithemba ukuthi ungasho kwenye indawo ukuthi uke wasebenza nabo kusayithi uma ubusebenzisa njengesibonelo encwadini, yebo. Kepha lokho kunikeza udumo kulokho okushoyo ukuthi kusebenze nabo (futhi angazi kahle ukuthi isetshenziswe kanjani uma ngithi ngizozwa ukuthi okwenzile kungahle kuthathwe njengokungalungile.)
Bekufanele ngikuhlukanise lokhu kube ngamazwana ama-2 🙂
Abavangeli bomkhiqizo - YEBO! uma uthola imali kubantu okhuluma ngabo kungcono ucaciseleke ngakho. Ukube i-MS ibinenqwaba yabantu ebeke izingxoxo ezingqungqutheleni mayelana nemikhiqizo ye-MS, bezenza abasebenzisi abaqotho abenza ngothando lwabo lomkhiqizo bese bebaholela ukwenza lokho kungaba nesikhalo esikhulu ngawo. Yize ngingowokudlulela kunoma iyiphi indlela ngincike kulezo zinto njengoba noma nini lapho ngikhuluma nge-WP ngiyaqiniseka ukuthi ngishiseka kakhulu ngomkhiqizo futhi angikaze ngikhokhelwe ukusho lutho ngawo ( noma ngenze imali ngokwezifiso izinto zabantu.)
Ukuthenga ikhofi - Futhi ngicabanga ukuthi lokhu kubuyela kokunikeziwe. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu akholelwe ukuthi awunalutho ongamthengisa ngalo uma wenza lokho.
Ezentengiso - Sebevele bakwenza lokhu “ngobufakazi babo obukhokhelwayo 'lapho umuntu wangempela ekhuluma. Futhi ngicabanga ukuthi 'kunikezwe ukuthi akekho okubuza lokho.
Ngicabanga ukuthi ekugcineni konke kuza ekwethembekeni kwalokho okushiwoyo kanye nenhloso yezenzo ezishiwoyo. Ezimweni eziningi lapho sikhangiselwa khona siyakwazi nokuthi kwenziwa nini lapho lokho kungafiphaza lowo mugqa abantu kufanele bawupelete (njengokufaka isikhangiso esikhokhelwayo kwizikhangiso zamaphephandaba ezibukeka njengezindatshana noma ama-infomercials.) Yilapho abantu befuna ukukhohlisa ukuthi bangobani noma ubuhlobo abanabo. Angicabangi ukuthi izindlela zokukhangisa ezithembekile zinokuthile okufanele zikukhathaze ngoba kusenokuningi okungekho emthethweni nokungcolile okufanele kwehliswe kuqala.
Aug 30, 2010 ngo-7: 29 PM
Wenza ukucabanga okuningi @ripsup, futhi isigaba sakho sokugcina sisekela yonke impikiswano yami. "Lokhu kuhambisana nokwethembeka… nenhloso." Angiphikisani nawe nakancane. Ngakho… ngicela uchaze ukuthi i-FTC izocacisa kanjani ukuthi ngithembekile noma cha nokuthi yini inhloso yami.
Aug 30, 2010 ngo-11: 32 PM
Yebo i-FTC ingahle ibheke kuyo kuphela uma kunesikhalazo. Uma uzenza omunye umuntu noma ufihla ukuthi unenzuzo ethile yezezimali ngokusho okuhle (noma okungekuhle kumikhiqizo yabancintisana nayo) lokho kufanele kubhekwane nakho. Esihlokweni sithi
"UReverb uzifake emanzini ashisayo nohulumeni ngezinsolo zokuthi unikeze isithombe sokuthi izibuyekezo zivela kubathengi abazimele futhi wehluleka ukudalula ukuthi waqashelwa ukuthuthukisa leyo midlalo nokuthi kwathatha iphesenti lanoma yikuphi ukuthengisa."
Ngiyavumelana nesigaba sakho sokugcina sokuthi uthembekile (atleast kulokho engikwaziyo ngawe) ngakho ngeke bathole inkinga kulokho. Kepha, ukube ubushaya uChaCha usuku lonke usho ukuthi ungumuntu ozimele ngenkathi ukhokhelwa lokho kungaba yinkinga. Zonke ezinye izindlela zokukhangisa zinayo le nkinga efanayo futhi zithole izindlela zokubeka lokhu ngendlela yokuthi umthengi aziswe ngalolu daba. Lokhu akukusha futhi ngicabanga ukuthi imithetho efanayo iyasebenza njengakuqala nokuthi kungani ngiphikisana nezibonelo.
Inothi eseceleni: Ngikhetha imithetho yase-UK ekukhangiseni eqinile kunaleyo yethu futhi ngifisa ukuthi ngabe sizokwamukela into efanayo.
Aug 31, 2010 ku-6: 17 AM
Kuzohlala kukhona abathengisi abangathembekile futhi, ngenxa yezenhlalo, igama lizophuma kulaba bantu. Noma ngabe yini eyenzeke 'kumthengi qaphela', noma kunjalo? Ngabe asisenasibopho somuntu siqu? Okunye okungikhathaza ngalokhu kuzoba ukuthi imisebenzi eminingi 'ethembekile' izosuka iye olwandle njengoba abathengisi kanye nama-ejensi e-PR bephoqeleka ukuvala iminyango ngenxa yokwesaba ukwephula izinqumo ze-FTC (okuyizinkombandlela empeleni, hhayi umthetho). Kungumfowethu omkhulu futhi angikwazi ukuma.
I-PS: Iya ChaCha! 😉
Aug 31, 2010 ku-10: 10 AM
Ngaphambi kokuthi ngiqale ukuphawula kwami, mangisho ukuthi anginabo ubudlelwano obusemthethweni bezohwebo Douglas Karr, izinkampani zakhe ezahlukahlukene kanye nezinhlangano zezentengiselwano, futhi anginayo intshisekelo eqondile yokwenza imali ngokubamba iqhaza kubhulogi yakhe kanye nokuphawula okulandelayo okungabonisa noma kungakhombisi imizwa yami noma yangempela. Ngaphezu kwalokho, noma iyiphi intshisekelo yebhizinisi etholakala ngokwenza la mazwana kungenxa yemizamo engeyona eyezentengiselwano yokuphromotha okuzenzela, okungenzeka noma kungathinti lutho olufanele.
Okuthunyelwe okuhle, uDoug.
Aug 31, 2010 ngo-3: 47 PM
Ngikhathazekile ngemithambeka eshelelayo njengomfana olandelayo, uDouglas. Kepha njengoba ukhomba ekugcineni, umkhuba okukhulunywa ngawo wawukhohlisa ngokusobala. Kwakungeyona indaba yokudalulwa, kwakuyindaba yokukhwabanisa "ukuzenza amakhasimende ajwayelekile". Kwakukhona isipuni esikhulu senhloso lapha.
Aug 31, 2010 ngo-4: 07 PM
Kuyaqondakala, u-Ian. Kepha imithethonqubo ye-FTC ayikhulumi ngenkohliso - ikhuluma ngokudalulwa kuphela.
Aug 31, 2010 ngo-4: 22 PM
Ngiyakhumbula lapho le nto yephuka futhi ngicabanga ukuthi ibicace bha ohlangothini lokukhohlisa ngezinto ngaleso sikhathi, ngahamba ngayoyibuka.
Indatshana ye-cnet empeleni ayingeni ngqo kulokho abakwenzile futhi iluhlobo lokuthatha izinhlangothi zombili kulokho abakushoyo (mhlawumbe ngenxa yenkokhelo.) Ngicabanga ukuthi uma nje usubona lokho enye i-athikili enakho kuba sobala kakhulu ukuthi bekuyini kuqhubeka nokuthi bekucacile okuningi okucacile.
Aug 31, 2010 ngo-4: 25 PM
Futhi nesilinganiso esivela kumbiko we-ftc.
"Ukwehluleka ukudalula la maqiniso, ngenxa yesiphakamiso esenziwe, bekungumkhuba okhohlisayo."
Sep 1, 2010 ku-12: 38 AM
@ripsup Wow… ngakho… okubi kakhulu. Ukucatshangelwa ukuthi uma UNGADALI = uyakhohlisa. = -X
Sep 1, 2010 ku-12: 46 AM
"Akukho Ukudalula" + "ukumelwa okungamanga okwenziwe" = ukukhohlisa
Linda ngaphandle kokuthi uyi- “SexyHotCheerTeen17” ebengikade ngixoxa nayo ku-AIM futhi yilokho okukhathazayo ngokungena enkingeni. Bengicabanga ukuthi kuyaxaka lapho isihloko ngokuzumayo sishintshela kuChaCha. 🙂
Sep 1, 2010 ngo-2: 01 PM
Ngibeka * eceleni kwalapho nginobudlelwano bokuxhumana khona futhi i-ixhunyaniswe emuva ekhasini lami lokudalula. Kwenziwe
Sep 1, 2010 ngo-2: 08 PM
Ngeshwa, lokho ngeke kusebenze uDave. Sengivele ngizamile ukwenza leyo ndlela ivunyelwe noDavid futhi wathi angikwazi ukumane ngiyibeke ku-TOS yami… bekudingeka ukuthi ihambisane nakho konke okushiwo.
Sep 2, 2010 ku-8: 39 AM
UDouglass, Ngiyabonga ngokuthunyelwe, isihloko sayo esithakazelisa kakhulu. Ngingasho ukuthi lowo mkhuba ufana nokufaka ubufakazi obungamanga kupakethe lakho. Ngokuya ngohlu lwakho lokukhathazeka, lokhu kuzwakala sengathi benza isibonelo, esifana nalokho uhulumeni akwenze ngeNapster namabhizinisi ngezingoma eziyizigidi kwiseva eyabiwe esikhathini esedlule. Kubukeka sengathi ungahle uthathe izibonelo ngokweqile, ngabe lokhu kwenzelwa ukukhombisa? Ngingacabanga ukuthi nje ungenzi lutho olukhohlisa amakhasimende ukuthi athenge umkhiqizo futhi mhlawumbe ucacile.